भ्रष्टाचारको आरोपमा भारतका पूर्व गृहमन्त्री मध्यरातमा समातिए ! - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
भ्रष्टाचारको आरोपमा भारतका पूर्व गृहमन्त्री मध्यरातमा समातिए !
एजेन्सी । भारतका पूर्व गृह तथा अर्थमन्त्री पी चिदम्बरम भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । उनलाई सीबीआईको टोलीले हाईवोल्टेज ड्रामा पछी गएराति पक्राउ गरेको हो । सीबीआईले चिदम्बरमलाई जोर बाग स्थित् उनको घरमा पुगी उनलाई हिरासतमा लिएर त्यसपछि सीबीआई मुख्यालय लगेको थियो ।
७३ वर्षीय चिदम्बरमलाई आज सीबीआईले विशेष अदालतमा पेश गर्नेछ । चिदम्बरमले आफूमाथि लागेको भ्रष्टाचार आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन् । उच्च अदालतबाट अग्रिम जमानत रद्द भएपछि पी चिदम्बरमलाई पक्राउ गरिएको हो । त्यसक्रममा यो मुद्दामा राहतका लागि सर्वोच्चको शरणमा गएका थिए । उनको निवेदनमा शुक्रबार सुनुवाई हुनेछ ।
बुधबार साँझ करिब सवा ८ बजे पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूमाथि लागेका सबै आरोप खारेज गरेका थिए । उनले आफू नभागेको तर आफ्नो हित रक्षाका लागि कानुनको शरणमा गएको बताए ।